Dilaagii Malmö oo la xukumi rabo | Somaliska
Dilaagii Malmö oo la xukumi rabo
Ninkii soo galootiga ku bartilmaameedsaday magaalada Malmö sanadkii hore ayaa mardhow la xukumi doonaa. Dacwad Oogaha ayaa maxkamada ka dalbaday in ninkaan lagu xukumo xabsi daa’in maadaama dambiyada uu geystay ay qataryihiin.
Ninka lagu magacaabo Peter Mangs ayaa sanadihii 2010-2011 waxa uu cabsi weyn ku abuuray soo galootiga ku nool Malmö isagoo si qarsoodi ah ku dilay 3 qof, 12 kalena dhaawacay. Mangs ayaa dadka uu dilay ku raadsaday in ay yihiin soo galooti isagoo dadka uu dhaawacay ay ku jiraan Soomaali.
Dacwad oogaha ayaa maxkamada u sheegay in Mangs uu yahay nin aan naxariis lahayn oo xitaa aan ka qoomamayn dadkii uu noloshooda burburiyay. Dacwad oogaha ayaa intaas ku daray in Mangs dilalka uu geystay ay ka dambeysay cunsuriyad isagoo u arka dadka soo galootiga ah “daanyeero”. Sidaa darteed ayaa dacwad oogaha dalbaday in xabsiga ugu dheer lagu xukumo ninkaan.
Xaakimka maxkamada ayaa la filayaa in uu marka hore amro in baaritaan xaga madaxa ah lagu sameeyo Mangs inta aan la xukumin. Haddii ay cadaato in madaxa looga jiro ayaa ninkaan loo diri doonaa xabsiyada dadka waalan, haddii kale xabsi caadi ah ayaa loo diri doonaa.
Ninkaan ayaa diiday 19 ka mid ah 20 dambi oo lagu soo oogay. Waxa keliya oo uu qirtay in uu dukkaan xabad ku riday. Booliska ayaa sheegay in ninkaan ay ku cadeynayaan dambiyada maadaama xabada lagu dilay dadka laga riday bastooladiisa. Sidoo kale, ninkaan ayaa la sheegay in si qarsoodi ah uu u qirtay in uu ka dambeeyay dambiyada lagu soo oogay.
Sweden ayaa qofka xabsi daa’inka lagu xukumo waxaa uu xaq u leeyahay in 10 sano ka dib uu dalbado in laga yareeyo xabsiga. Sida caadiga ah xitaa qofka xabsi daa’inka lagu xukumay kuma gaaro xabsiga 20 sano ka badan. Xukunka dilka kama jiro Sweden.
Dadka cusub oo cayrta laga badbaadinayo [Video]
Gariiga oo lagu cambaareeyay sida uu ula dhaqmo qaxootiga.
July 17, 2012 at 15:38
Asc/dhaman?waxan idin haya in ey safarada neyrobi ey bilawday bixinta fisihi wa cidi ey wax udhamaden,
bishaan ayaa la furay see u bilaabi kartaa fiso kiiska masoo gaarin swedan
July 18, 2012 at 03:25
ASC DHAMAAN AQYAARTA RAG IYO DUMAR OK XAAKIMKA MAXKAMADA MARKUU LEE YAHAY NIN KA WAA LA BAARAA XAA LAGA BAARAA WAABA UJEEDYAA IN UU AJAANIB NECEEB KUJIRO MAADAAMA UU AJAANIB WAX U GEESTAY MISE NINKA QOF KASTA OO KA SOO HORBAXDA AYUU WAX U GEESTAY?? NIN KA DAD KA UU DILAY HADEY KU JIRAAN SWEDESH WAA LAGA YAABAA IN UU MADAXA WAX KA QABO LKN HADEYSAN KU JIRIN WAA AJAANIB NECEEB WAABA IS KA CADAHAYE XAA LAGA BAARAA??